Akụkọ Bible: Ụmụ Okorobịa Anọ Ndị Nọ na Babilọn - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bicol Bislama British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cinyanja Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Ewe Faroese Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Nicaraguan Sign Language Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Rarotongan Romanian Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen (Cyrillic) Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Ukrainian Umbundu Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
EZE Nebukadneza dọọrọ ndị Izrel niile kasị mara akwụkwọ n’agha wee laa Babilọn. E mesịa, eze si n’etiti ha họpụta ụmụ okorobịa ndị kasị maa mma na ndị kasị mara ihe. Ụmụ okorobịa anọ ndị ị na-ahụ n’ebe a so n’ime ha. Otu bụ Daniel, atọ ndị ọzọ ka ndị Babilọn gụrụ aha bụ́ Shedrak, Mishak, na Abednego.
Nebukadneza chọrọ ịzụ ụmụ okorobịa ahụ ka ha wee na-eje ozi n’obí ya. Ọ bụrụ na e nyesịa ha ọzụzụ ruo afọ atọ, ọ ga-ahọrọ naanị ndị kasị mara ihe ka ha na-enyere ya aka n’ịhụ maka nsogbu dị iche iche. Eze chọrọ ka ụmụ okorobịa ndị ahụ gbasie ike ma nwee ahụ́ ike mgbe a na-enye ha ọzụzụ. N’ihi ya, o nyere iwu ka ndị ohu ya na-enye ha niile ụdị nri ọma na mmanya ọma ahụ a na-enye ya na ezinụlọ ya.
Lee nwa okorobịa ahụ bụ́ Daniel. Ị̀ ma ihe ọ na-agwa Ashpenaz, bụ́ onyeisi nke ndị ohu Nebukadneza? Daniel na-agwa ya na ya achọghị iri nri ọma si na tebụl eze. Ma nke a mere ka Ashpenaz na-echegbu onwe ya. O wee sị: ‘Eze ekwuwo ihe unu ga na-eri na ihe unu ga na-aṅụ. Ọ bụrụkwa na unu enweghị ahụ́ ike dị ka ụmụ okorobịa ndị ọzọ, ọ pụrụ igbu m.’
Ya mere, Daniel jekwuuru onye Ashpenaz nyere ọrụ ilekọta ya na ndị enyi ya atọ. O wee sị ya: ‘Biko, lee anyị ule ụbọchị iri. Na-enye anyị akwụkwọ nri na mmiri ọṅụṅụ. E mesịa, nyochaa anyị na ụmụ okorobịa ndị ọzọ ndị na-eri nri eze, ka ị hụ ndị ga-enwe ahụ́ ọma karị.’
Onye ahụ na-elekọta ha kwetara ime nke a. Mgbe ụbọchị iri ahụ zuru, Daniel na ndị enyi ya atọ nwere ahụ́ ọma karịa ụmụ okorobịa ndị ọzọ. N’ihi ya, onye nlekọta ahụ kwere ka ha na-eri akwụkwọ nri kama iri ihe ahụ eze sịrị ka e nyewe ha.
Mgbe afọ atọ gasịrị, a kpọgaara Nebukadneza ụmụ okorobịa niile ahụ. Mgbe eze gwasịrị ha niile okwu, ọ chọpụtara na Daniel na ndị enyi ya atọ kasị ndị ọzọ mara ihe. Ya mere, ọ kpọọrọ ha ka ha na-enyere ya aka n’obí ya. Mgbe ọ bụla eze jụkwara Daniel, Shedrak, Mishak, na Abednego ajụjụ ma ọ bụ nye ha ọrụ siri ike, ha maara ihe okpukpu iri karịa ndị dibia anwansị ya ma ọ bụ ndị ya maara ihe.
Ụmụ okorobịa anọ ndị a nọ na foto a hà bụ ole ndị, gịnịkwa mere ha ji nọrọ na Babilọn?
Gịnị bụ nzube Nebukadneza banyere ụmụ okorobịa anọ ndị a, oleekwa iwu o nyere ndị ohu ya?
Olee arịrịọ Daniel rịọrọ banyere ihe oriri na ihe ọṅụṅụ maka ya na ndị enyi ya atọ?
Mgbe Daniel na ndị enyi ya atọ risịrị akwụkwọ nri ruo ụbọchị iri, olee otú ha dị n’anya ma e jiri ha tụnyere ụmụ okorobịa ndị ọzọ?
Olee otú Daniel na ndị enyi ya atọ si bịa nọrọ n’obí eze, oleekwa otú ha si kara ndị anwansi na ndị maara ihe mma?
Gụọ Daniel 1:1-21.
Olee ụdị mgbalị ọ dị mkpa ka anyị na-eme ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iguzogide ọnwụnwa ma merie adịghị ike? (Dan. 1:8; Jen. 39:7, 10; Gal. 6:9)
Olee ụzọ ndị a pụrụ isi nwaa ndị ntorobịa ma ọ bụ rụgide ha itinye aka n’ihe mmadụ ụfọdụ na-ele anya dị ka “ihe oriri ọma”? (Dan. 1:8; Ilu 20:1; 2 Kọr. 6:17-7:1)
Gịnị ka ihe ndekọ Bible banyere ndị ntorobịa Hibru anọ ahụ na-enyere anyị aka ịghọta banyere inweta ihe ọmụma ụwa? (Dan. 1:20; Aịsa. 54:13; 1 Kọr. 3:18-20)